Obodo Kildare - IntoKildare
N'ịbụ nke dị n'ime ala adịghị mma, Kildare Village bụ ebe ịzụ ahịa okomoko zuru oke, naanị otu awa site na Dublin. Ọ ga -esiri gị ike iguzogide ọnwụnwa na ụlọ ahịa 100 sitere na ndị nrụpụta kacha atọ ụtọ n'ụwa niile na -enye ihe ruru 60% kwụsịrị ọnụ ahịa azụmaahịa akwadoro.
Obodo Kildare bụ otu n'ime ebe ịzụ ahịa okomoko iri na otu dị na mkpokọta ịzụ ahịa Village Bicester n'ofe Europe na China, otu awa ma ọ bụ ihe na -erughị site na ụfọdụ obodo ama ama n'ụwa. Chọpụta ụlọ nri ndị ama ama, ọrụ onye na-elekọta ụlọ, ezigbo ile ọbịa kpakpando ise na ịchekwa ego dị ịtụnanya.
Obodo Kildare dị nso na M7 na Ọpụpụ 13 erughị otu awa site na Dublin. Ụgbọ ala ma nwee ọmarịcha ebe a na-adọba ụgbọala n'efu ma ọ bụ were ọrụ ụgbọ oloko na-ewe nkeji iri atọ na ise na-apụ ọkara awa site na ọdụ ụgbọ elu Dublin nke Dublin. Nleta IrishRail.ie maka nkọwa ndị ọzọ na oge ụgbọ oloko na onyinye pụrụ iche. Site na ọdụ ụgbọ elu Kildare hop na bọọdụ ụgbọ ala Kildare Village nke na -ezute ụgbọ oloko niile ụbọchị asaa n'izu. Ụgbọ ala ụgbọ ala na -arụ ọrụ na Irish National Stud Gardens na Museum Museum ọtụtụ ugboro n'ụbọchị.
Ịzụ ahịa, Bọchị mmiri ozuzo, Cafes, Kildare
Okporo ụzọ, Obodo Kildare, R51 R265, Ireland.
Gaa na webụsaịtị maka oge mmeghe nke oge. Ụbọchị ekeresimesi emechiri emechi.